Ọ dịghị 3D kokpiiti mgbe wụnye Airbus A330 Multi-livery ngwugwu
Ọ dịghị 3D kokpiiti mgbe wụnye Airbus A330 Multi-livery ngwugwu 2 afọ 11 ọnwa gara aga #703
M bu ụzọ wụnye ngwa ngwa Airbus A330 Multi-Livery, mgbe ahụ, m wụnye Airbus A340 Mega Package Vol 1. Mgbe e mesịrị, m na-etinye Airbus A340 Mega Package Vol 2. Na mberede, A330 na A340 (Vol. 1) enweghi 3D cockpits ọzọ! M gbalịrị ihe niile dị ka ntinyeghachi na ndị dị otú ahụ na m na-eji Gauge ngwá ọrụ ma nke ahụ obere enyemaka. A ga-enwe ekele dị ukwuu maka enyemaka ọ bụla.
Ọ dịghị 3D kokpiiti mgbe wụnye Airbus A330 Multi-livery ngwugwu 2 afọ 11 ọnwa gara aga #711
Enwere m otu nsogbu ahụ, enyemaka ga-amasị onye ọ bụla.
Ọ dịghị 3D kokpiiti mgbe wụnye Airbus A330 Multi-livery ngwugwu 2 afọ 11 ọnwa gara aga #712
Ekele ma unu ma nabata.
Ụfọdụ ụgbọelu na mkpọ ahụ sitere POSKY, ha enweghị VC. Ndị si Thomas Ruth nwere ya.
Ọ dịghị 3D kokpiiti mgbe wụnye Airbus A330 Multi-livery ngwugwu 2 afọ 11 ọnwa gara aga #717
Dariussssss dere, sị: Na-ekele unu ma nabatara ya.
Daalụ maka azịza ya, ọ dị na agbanyeghị ka POSKY nwere VC?
Oge ike page: 0.304 sekọnd